केराले बजार नपाउँदा चरालाई आहारा – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/केराले बजार नपाउँदा चरालाई आहारा
केराले बजार नपाउँदा चरालाई आहारा
भरतपुर – चितवनमा उत्पादित केराले बजार नपाउँदा चरालाई आहारा बनेको छ । लकडाउनसँगै केराको माग घटेका कारण बिक्री हुन नसकेपछि खेतमा पाकेर चराको आहार बनेको हो । केराको मुख्य सिजनमा नै केरा बिक्री नभएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । यस वर्ष उत्पादन राम्रो भए पनि निषेधाज्ञाका कारण बारीमै पाकेर केरा झर्ने अवस्था आएपछि किसानले लगानीसमेत गुमाउने अवस्था आएको छ । निषेधाज्ञामा सरकारले कृषि उपजलाई ढुवानी गर्न सहज वातावरण बनाए पनि बजार नखुल्दा बिक्रीमा समस्या भएको हो ।
केरा व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष घननाथ महतो केरा बिक्री नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो समयमा बजारको निकै ठूलो समस्या छ ।” पच्चीस देखि ३० प्रतिशत केरा खेतमै पारेर झर्दै गरेको र कतिपय चराको आहार बनेको उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो “केरा बोटमै पाकेको छ, चराले आधा खाँदै छाड्दै गरेको देख्न सकिन्छ ।”नेपालमा लकडाउन शुरुसँगै केरा पाकेको थियो । बीचमा लकडाउन खुलेसँगै केही सहज भए पनि फेरि अवस्था झन् जटिल बनेको उहाँले बताउनुभयो । “यस वर्ष केराको उत्पादन राम्रो थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “बजार र मूल्य पाइएन, करोडौँको क्षति भयो ।”
उहाँले निषेधाज्ञामा पनि भारतीय केरा नेपाली बजारमा आएको तर नेपाली केराले बजार नपाएको गुनासो गर्नुभयो । यो समयमा व्यपारीले सहजै केरा लैजान नमानेको र लगिहाले पनि मूल्य निकै कम पाउने गरको महतोको भनाइ छ ।तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्दा झन् समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । “यहाँबाट केरा लगिए पनि जिल्ला र पालिकाहरुमा अवरोध गर्ने गरिएको छ, कतिपय अवस्थामा बाटोमै रोकिनुपर्ने अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष मलको अभाव छ । केराका लागि मल अत्यावश्यक छ, यस्तै भयो भने अर्को वर्ष उत्पादन घट्छ ।
केरा व्यवसायी यज्ञ सुवेदीले निषेधाज्ञाले ग्राहक बजार आउन नपाएपछि केरा बिक्री हुन छाडेको बताउनुभयो । “लकडाउनभन्दा पनि निषेधाज्ञापछि झन् समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिहान र बेलुकाको थोरै समयमा ग्राहक बजारसम्म जाने अवस्था छैन ।”केरा बिक्री नभएपछि आफैँ पसल–पसलमा खुद्रा बिक्री गर्दै हिँड्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । “बारीमा केरा पाकेको छ, बिक्री नभएर चराले खाइरहेको छ, केही झरेर नष्ट भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यस वर्ष समयमा नै पानी परेका कारण केराको उत्पादन राम्रो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो रु ५० लाखको केरा क्षति भएको बताउनुभयो । “मैले एक सिजनमा रु तीन करोडको केरा बेच्थेँ”, उहाँले भन्नुभयो “यस वर्ष रु दुई करोड पुग्न पनि धौधौ छ ।” सुवेदीले ७० बिघामा केराखेती गर्दै आउनुभएको छ । गत वर्ष रु ७० दर्जनसम्म बिक्री भएको केराको मूल्य यस वर्ष रु ५० भन्दामाथि पुग्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा अधिकांश किसानले मालभोग र जिनाइन केरा लगाएका छन् । महानगर फलफूल तथा तरकारी बजार नारायणगढका प्रबन्ध निर्देशक थीरप्रसाद धितालले बजारमा फलफूलको बिक्री न्यून रहेको बताउनुहुन्छ ।
“प्रशासनले तीन घण्टाभन्दा बढी समय पसल खोल्न दिँदैन, ग्राहक आउने समय नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो । ठेला र सडकपेटीमा व्यापार गर्नेलाई पनि प्रहरी र स्थानीयवासीले अवरोध गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।चितवनमा उत्पादन भएको केरा बाहिरी बजारमा निर्यात नभएपछि नारायणढको बजारमा थुप्रिएको धितालले बताउनुभयो । उहाँले चितवनमा भारतीय केरा नआएको भन्दै चितवनको केराले माग धान्न नसक्ने अवस्थामा मात्र ल्याउने गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले यस वर्ष चितवनमा केराको उत्पादन राम्रो भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोनाका कारण बजारीकरणमा समस्या भएको र किसानले गत वर्षझैँ मूल्य नपाएको बताउनुभयो । यस वर्ष मात्र जिल्लामा २०० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा केराखेती विस्तार भएको छ । युवाहरुको आकर्षण पनि बढ्दो छ । चितवन केरा उत्पादनका लागि अग्रणी जिल्ला मानिन्छ । जिल्लामा तीन हजार २०० बिघामा केराखेती गरिएको छ ।चितवनको रत्ननगर, कालिका, खैरहनी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको पश्चिमी क्षेत्र केरा उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । हावाहुरीलगायतका कारणले हुने क्षतिको राज्यको अनुदानमा बीमा हुने भए पनि बजारीकरणबाट हुने नोक्सानी भने किसान आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।रासस
फेरी लकडाउन, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने
तीजकाे मुखैमा साेच्नै नसक्ने गरी ह्वात्तै घट्याे सुनकाे भाउ, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
तरकारी खाल्डोमा हाल्नेलाई १० वर्ष कैद हुने !
विश्लेषकहरुको विश्लेषणः गम्भिर संकटमा फस्यो नेपाल, ‘उत्तर कोरिया’ बन्नसक्छ